Zofari anotaura kechipiri (1-29)
Anonzwa seari kutukwa naJobho (2, 3)
Anopa pfungwa yekuti Jobho akaipa (5)
Anoti Jobho anofarira chivi (12, 13)
20 Zofari+ muNaama akapindura achiti: 2 “Pfungwa dzangu dzinondinetsa dziri kundituma kuti ndipindureNekuti ndiri kushungurudzika. 3 Ndanzwa mashoko ekutsiura andituka;Uye kunzwisisa kwandinoita kuri kuita kuti ndide kupindura. 4 Haungati wagara usingazvizivi,Nekuti ndizvo zvazvagara zviri kubvira pakaiswa munhu* panyika,+ 5 Kuti kupembera kwevanhu vakaipa ndekwenguva pfupiUye kuti kufara kwemunhu asingadi Mwari* ndekwechinguvana.+ 6 Kunyange zvazvo ukuru hwake huchikwira kudengaUye musoro wake uchisvika kumakore, 7 Achaparara zvachose sezvinoita tsvina* yake;Vaya vaimuona vachati, ‘Ari kupi?’ 8 Achabhururuka oenda sechiroto, uye havazomuwani;Achadzingwa sechiratidzo cheusiku. 9 Ziso rakambomuona harizomuonizve,Uye musha wake hauzomuonizve.+ 10 Vana vake vachatsvaga kunzwirwa nyasha nevarombo,Uye maoko ake achadzorera pfuma yake.+ 11 Mapfupa ake akanga akazara simba reudiki,Asi richarara pamwe chete naye muguruva. 12 Kana zvakaipa zvichitapira mukanwa make,Kana achizviviga pasi perurimi rwake, 13 Kana achinakirwa nazvo, asingazvisiyiAsi achiramba ainazvo mukanwa make, 14 Zvekudya zvake zvichavava zviri mukati make;Zvichaita seuturu hwemhungu* maari. 15 Akamedza pfuma, asi achairutsa;Mwari achaibudisa mudumbu make. 16 Achasveta uturu hwemhungu;Mazino enyoka achamuuraya. 17 Haazombooni nzizi dzemvura,Uchi neruomba zvinoyerera. 18 Achadzorera zvinhu zvake asina kumbozvidya;*Haazofadzwi nepfuma yaanowana paanenge atengesa zvinhu zvake.+ 19 Nekuti akapwanya varombo akavarasa;Akapamba imba yaasina kuvaka. 20 Asi haazogadzikani mukati make;Pfuma yake haizomubatsiri kupukunyuka. 21 Hapana chasara chekuti abvute;Ndokusaka asingazorambi achibudirira. 22 Pfuma yake painenge yawanda chaizvo, achatanga kuzvidya mwoyo;Zvinhu zvese zvakaipa zvichamuwira. 23 Paanenge achizadza dumbu rake,Mwari achamutumira kutsamwa kwake kukuru,Achikunayisira paari kuchipinda muura hwake. 24 Paachatiza zvombo zvesimbi,Miseve inobva pauta hwemhangura ichamubvoora. 25 Anozvomora museve kumusana kwake,Chombo chinopenya changa chapinda munduru yake,Obva atanga kutya.+ 26 Rima gobvu rakamirira pfuma yake;Moto usina kupfutidzwa nemunhu uchamuparadza;Dambudziko rakamirira vese vanenge vapona mutende rake. 27 Denga richabudisa pachena chivi chake;Nyika ichamupandukira. 28 Mafashamo achakukura imba yake;Pachava nekutsvotsvoma pazuva rekutsamwa kwaMwari.* 29 Uyu ndiwo mugove wemunhu akaipa unobva kuna Mwari,Nhaka yaakanzi naMwari ndeyake.”
^ Kana kuti “Adhamu.”
^ Kana kuti “ndove.”
^ Kana kuti “senduru yemhungu.”
^ ChiHeb., “uye haazomedzi.”
^ ChiHeb., “kwake.”